Kamshaa Saagi bakka wantoota ida'uu dandeessu banaa gabatee dabalachuun, wardii fi fakkiiwwan, galmee keetiif.
Islaayidii amma filameen booda islaayidii galcha. Fuula amma filameen booda fuula galcha.
Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.
Faayilii gara islaayidii ka'aati saaga. Galmee yookiin faayilii barreeffama HTML irraa fakkasaa. LibreOffice yookiin faayilii Impressi yookiin barreeffama saaguu dandeessa.
Wantoota OLE galmee ammee keessatti Saaga. Wanti OLE akka kornyoo ykn wanta ida'ameetti saagameera.
This page is: /text/simpress/02/10110000.xhp